Somaliland: Baashe Cawil (Morgan) Oo Xil-wareejintiisii Safiirka Imaaraadka Ku Faanay Mashruucii Fashilmay Ee Biyo Xidheenka Xumboweyne Iyo Kambaniga Shakiga Laga Muujiyey - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Baashe Cawil (Morgan) Oo Xil-wareejintiisii Safiirka Imaaraadka Ku Faanay Mashruucii Fashilmay...
Safiirkii Somaliland u fadhiyey waddanka Isu-tagga Imaaraadka Carabta Mudane Baashe Cawil Cumar oo dhawaan Madaxweyne Muuse Biixi u wareejiyey dhinacaa iyo waddanka Kenya ayaa qoraal uu soo saaray oo uu kaga hadlayo arrimihii uga qabsoomay mudadii uu joogay waddanka Imaaraadka waxa uu ku xusay dhacdooyin layaab leh oo aanay ahayn in uu ku faano balse ahayd in uu ka waabto umaddana u caddeeyo oo ay ka mid ahaayeen mashruucii biyo-xidheenka Xumbo weyne oo uu ku sheegay mid guulaystay halka wakhtigan biyo xidheenkaasi aanu ahayn mid hal litir oo biyo ahi ku jiraan kaliyana waxa ka muuqdaa tahay ciid fara badan.
Mudane Baashe Cawil Cumar waxa kale oo uu ku faanay mashaariic uu ku sheegay in uu isagu soo jiiday oo ay ka mid yihiin dhinaca caafimaadka iyo ganacsiga isaga oo tusaale u soo qaatay kambaniga shakiga weyn laga muujiyey ee ay ku qoran yihiin isaga iyo Wasiirka Khaarajigu.
Inkasta oo Ambasaddor Baashe Cawil ku dooday in mashruuca Biyo xidheenka Xumboweyne kaydinayo biyo xadigoodu leegyahay 500,000 Metric Cubic ayaanay waxba ka jirin oo uu biyo xidheenkaasi wakhtigan yahay mid qallalan oo aan haba yaraatee wax manaafacaad ah umadda u lahayn inkasta oo uu hore ugu sheegay in ay ku baxday Malaayiin Dollar.
Halkan ka akhriso qaybo ka mid ahaa qoraalka xil wareejintiisa uu ku xusay isaga oo ka hadlayay:
Wefdi koox Dhakhaatiir ah oo uu hoggaaminayay Dr. Sayid Al-Shaamiri oo ka socday dalka Imaaraadka Carabta(UAE) ayaa soo gaadhay dalka Somaliland xilli ku taariikhsay April 26, 2017. Ujeedada safarkoodu wuxuu ahaa in ay kaalmo caafimaad u sammeeyaan bulshada Somaliland muddo lix cisho ah. kooxdan dhakhaatiirta ahi waxay bulshada ugu shaqaynayeen xarunta kubadda Cagta ee Hargaysa Stadium, waxa la diwaan geliyay loona sammeeyay addeeg caafimaad oo lacag la’aan ah tiro ka badan 5000 oo qof, kooxdan dhakhaatiirta ahi waxay wateen shaybaadkoodii iyo dawooyinkii. Sidoo kale dawladda imaaraadku waxay dhakhtarka weyn ee Hargeisa ku caawisay qalabkii lagu sifaynayay kalyaha taas oo kaalin wayn ka ciyaaraysa habsami u socodka caafimaad ee dhakhtarka.
Mashruuca biyo xidheenka xumbo-weyne ee ay maaligalishay dawladda Imaaraadka Carabtu wuxuu noqday biyo xidheenkii ugu weynaa ee Somaliland yeelato, isaga oo awood u leh in uu kaydiyo biyo xadigoodu leegyahay 500,000 Metric Cubic. Sidoo Kale Ceelal dawladda Imaaraadku ka qodeen Gobolada dalka oo tiro ahaan gaadhaya 40 Ceel kuwaas oo wax tar badan u yeeshay dadkii abaaruhu saameeyaan.
Waxaanay ka mid ahaayeen guulihii xafiisku xaqiijiyay intii uu jiray.
Xafiiskaygu wuxuu xooga saaray sidii adduun weynaha loogu bandhigi lahaa fursadaha maalgashi ee ka bannaan Somaliland, dhinaca beeraha, warshadaha, khayraadka iyo dekedaha,
Innaga oo aan ilawsanayn caqabad” sidaas ayuu yidhi Baashe Cawil Oo Soo Saaray qoraal dheer oo uu kaga hadlayay waxyaabihii u qabsoomay” ayuu yidhi Baashe Cawil Cumar.